Inona ny atao hoe LEGO Boost: Torolàlana hahafantarana azy amin'ny lalina - Ikkaro
firosoana >> kilalao >> Inona ny atao hoe LEGO Boost
LEGO Boost dia kitapo fanombohana robotika ho an'ny ankizy mifototra amin'ny singa LEGO.. Izy io dia mifanaraka amin'ny LEGO sy Techno nentim-paharazana, mba hahafahanao mampiasa ny sombinao rehetra amin'ny fivoriambe ho avy.
Tamin'ity Noely ity dia nomen'ireo olon-kendry telolahy LEGO® Boost ny zanako vavy 8 taona. Ny tena izy dia nahita azy aloha be aho. Tsy te hampahafantatra ny zanako vavy amin'ny olana sarotra aho, saingy efa ela no nangatahany izany ary ny tena marina dia tena tsara tokoa ilay traikefa.
Manolo-kevitra ny ankizy 7 ka hatramin'ny 12 taona. Raha zatra milalao LEGO ny zanakao dia tsy hiteraka olana izany ilay fivoriambe. Ary ho hitanao fa eo anelanelan'ny famantarana ny fampiharana sy ny fanazavana vitsivitsy avy aminao dia hianatra hampiasa fandaharana sakana hatrany izy ireo.
Manodidina ny 150 € ny vidiny azonao atao vidio eto.
Inona avy izany?
Miorina amin'ny biriky na singa telo lehibe izy io:
Ilay Hub misy ny Bluetooth sy ny hub misy motera 2.
Motera ivelany faharoa
ary avy eo sensor sy loko ary halavirana.
Ireo fivoriambe izay tonga ao amin'ny torolàlana dia natao manodidina ireo singa telo ireo. Ireo anefa no tena lehibe satria izy ireo no mpanery. Ny iray amin'ny hafa dia azo soloina, saingy ilaina ireo faritra miasa ireo.
Raha mividy azy ianao dia tadiavo izay rehetra tokony ho fantatrao momba azy Mifindra foibe
Ny fiangonana 5 izay nohazavaina dia toy izao. Ny tsirairay avy dia samy manana ny efijery samihafa, izay ametrahanao kojakoja vaovao sy hamaha ireo sakana fandaminana vaovao. Mandra-pahatonganao mametaka sy manamarina fa mandeha ny base, tsy avelany handroso hatrany ianao.
Io no tarehimarika quintessential, ilay tonga ao an-tsaina rehefa mieritreritra ny LEGO® Boost izy ireo, satria izy io robot miaraka amin'ny endrika "humanoid". Io no montage izay mampatsiahy antsika indrindra ny hevitra ao an-tsaintsika momba ny robot.
Tena mahafinaritra izany. Miaraka amin'i Vernie isika dia afaka mifehy ny fihetsiny, mandroso sy mihemotra izy ary mivadika ho azy, eo amin'ny axis mitsangana. Amin'izany no ahodinantsika azy.
Tsy mampihetsika ny sandriny izy. Azontsika atao ny mandray azy haka zavatra amin'ny tanana. Ary ny endri-javatra mahafinaritra an'ny iray amin'ireo kojakoja dia ny famelana anay hitifitra marika LEGO, toy ny projectile.
Ny kit dia miaraka amin'ny Playmat, sarintany voamarina hahafahantsika mamindra ilay robot.
Môtô tena mampihomehy izay tian'ny ankizivavy. Tsy mihetsika izy fa mampihetsika ny lohany sy ny rambony ary mifanerasera amin'ny fihetsehana, loko, feo sns.
Amin'izao fotoana izao, amin'ny fiangonana 2 sisa, dia io no tsy nisy fiatraikany firy tamiko. Nandiso fanantenana ahy izany ary heveriko fa ny olana lehibe dia ny tsy misy fampahalalana momba ireo sakana ary satria tsy fantatrao hoe inona no ilain'ny tsirairay, tsy hainao ny mampiasa azy io rehefa tafangona sy ny fomba ifandraisana.
Raha ny fahitana azy dia milay be izy io ary maka tahaka ny ataon'ny fret amin'ny kaody miloko miaraka amin'ny halavirana sy ny lokon'ny sensor ary ny fampiasana levers isan-karazany hampavitrika ny vokany amin'ny motera hub sy ny motera ivelany.
Inona no atao hoe fanafohezana Rover misy fitaovana marobe, zavatra toy ny fitaovana maro an'ny Rover (fiara).
Mbola tsy nametaka azy io izy, fa raha ny zavatra hitako dia tiako izany, mihetsika sy mitifitra. Amin'izay dia efa nahazo isa maro izy.
Ilay mpanamboatra fiara
Ity dia tsipika famokarana mini hananganana modely LEGO® kely indrindra
Raha vantany vao manangona azy ireo izy ireo, dia havelako eto ny hevitro.
Tombony sy fatiantoka. Ny tsara sy ny ratsy indrindra
Toy ny vokatra rehetra dia misy zavatra tsara sy ratsy. Manoro izany aho. Ny tena marina dia tian'ny zanakay vavy sy izaho koa izy io, ary ankoatry ny olana sy zavatra holazaiko dia tena mahafinaritra sy mora ampiasaina.
Ny tena tsy tiako indrindra momba ny LEGO Boost
Tsy manana mpandahateny ireo sakana ireo ary ny feo lalaoviny sy izay raketiny dia amin'ny alàlan'ny tablette na rindranasa finday. Very fahasoavana be dia be rehefa vita ny resaka momba ny fiangonana nataonao, vita ny takelaka hazonao.
Fifanarahana fitaovana. Ny fividianana anao ny kitapo robotika ary ny fahitana fa tsy mifanaraka amin'ny takelakao dia iray amin'ireo fitarainana lehibe hitako tamin'ny Internet. Tsy nanana olana aho, na dia ny olana amin'ny Bluetooth aza dia manome ahy olana amin'ny takelaka Huawei ary tsy maintsy terentsika izany araka ny nohazavaiko tao tutorial ity.
Ny vidiny. Eny, vidiny lafo izany, marina izany, izay heveriko fa mendrika azy, saingy tokony ho azonao antoka fa ho tian'ny zanakao izany.
Ny antontan-taratasy. Tsy misy isalasalana fa ny ratsy indrindra amin'ny zavatra niainana rehetra hatreto. Na dia mitarika anao amin'ny zavatra rehetra tokony hataonao aza ny fampiharana, dia tsy misy na aiza na aiza anorizany ny atao hoe isaky ny inona ny programa ary raha mbola tsy nampiasainao ianao na raha olon-kafa izay nangonina no naka izany dia tsy fantatrao izay hatao. misy sakana maro.
Tena mieritreritra aho fa ny olan'ny antontan-taratasy dia zavatra iray izay tokony hijerena sy hamahan'izy ireo avy amin'ny LEGO.
Ny tiako dia mamela ny ankizy handroso sy hianatra tsy miankina ary tena tian'izy ireo izany.
Ho fanampin'izay, ny valiny mahafa-po dia azo haingana. Amin'ny zavatra tsy hanaparitahana azy ireo
Amin'ny maha LEGO azy dia afaka manovaova izay azontsika eritreretina amin'ny sombin-javatra isika. Ary azontsika atao ny mampiasa ireo sakana manokana telo miaraka amin'ny legao ananantsika ao an-trano ho an'ny fivoriambe hafa. Hataon'izy ireo hifaneraserana tokoa ny birikinay.
Izy io dia mifanaraka amin'ny LEGO Classic sy Tecnich
1 Inona avy izany?
2 Miakatra 5
2.2 Frankie saka
2.5 Ilay mpanamboatra fiara
3 Tombony sy fatiantoka. Ny tsara sy ny ratsy indrindra
3.1 Ny tena tsy tiako indrindra momba ny LEGO Boost
3.2 Izay tiako